Magento na osCommerce na OpenCart Ntụkọ
Ecommerce zuru ụwa ọnụ na-eto eto na 19% kwa afọ ma ghara ibelata oge ọ bụla. Nke a ozi si na Forix Web Design na-atụle atọ n'ime usoro ntanetị - Magento, osCommerce na OpenCart, iji nyere ndị ọrụ aka ịhọrọ ụdị ikpo okwu ecommerce nwere ike ịbụ nke kachasị mma maka saịtị ịzụ ahịa ha.
Atọ nke nyiwe ndị a karịrị ike karịa 30% nke ahịa. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ, na-eji usoro ikpo okwu ecommerce a nabatara nke ọma nke nwere nnukwu mmepe na nkwado obodo nwere ike inye gị ọnụ ịchọrọ. Ha bụ ndị kachasị ọsọ na ịnabata usoro ọhụụ - ma ọ bụ ọgaranya snippets or ekwentị mkpanaaka.
Tags: ecommerceecommerce tụnyeremagentomagento na emeghemagento na oscommerceoghereoscommerceoscommerce na opencart
Mee 23, 2013 na 2: 51 AM
Hey Douglas, nke a bụ nnukwu ntụnyere. Ihe m na-aghọtaghị bụ “X” @ “Magento -> Statistics”. Ọbụna mbipụta CE na-enye ọtụtụ akụkọ, ntụgharị ụgbọ ala agbahapụ, ndị na-ere ahịa, ndị ahịa kachasị elu na wdg.
Mee 23, 2013 na 10: 27 AM
Ọ bụ ezigbo okwu, @ google-65b2531b86017a5e6a499632b90ed9ce: disqus. Amaghị m na m ga-enwe X'd nke ahụ, ma. Ikekwe ọ bụ naanị iji tụnyere ụgbọ ndị ọzọ.
Mee 24, 2013 na 4: 41 AM
osCommerce bụ akụkọ ihe mere eme, Magento na-achịkwa nnukwu ụlọ ahịa. OpenCart na PrestaShop dị mma maka ndị pere mpe. Ekwadoro m ndị ahịa m niile ka ha kwaga osCommerce gaa Magento, Presta ma ọ bụ OpenCart. Ọ bụrụ na ị nọ na osCommerce - gaa n'ihu
"Magento dị mma maka nnukwu saịtị" na "Opencart dị mma maka
obere ”B NOTGH TR Eziokwu
Agụọla m nke a
ọtụtụ isiokwu na blog dee. Ahụmahụ anyị abụghị.
nnukwu size Diamond trading saịtị na OpenCart na Magento. Ma ghọtara “OpenCart“ bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ oru oma.
Magento hogs ọtụtụ nhazi ihe nkesa na ihe karịrị ihe ruru. 20,000
ngwaahịa DB indexing eme nzuzu. Maka ụlọ ahịa nke aka gị na-amụta usoro maka ụlọ ahịa magento
onye nwe ya gafee oke .OpenCart ndọtị dị ọnụ ala karịa na ọtụtụ.
More 90% ndị mmadụ maara na magento dị n'elu na ọtụtụ ndị dị ka nke a. fọdụrụ 10% dont like it just because of ya templet. Ma ka ha na-emeziwanye ya .. nke ahụ kpatara na ndị fọdụrụnụ na-esikwa n 'nyiwe ndị ọzọ niile na-eme nke ọma.
Ọkt 6, 2014 na 9:48 AM
fyi kacha ọhụrụ mbipute nke opencart bụ 2.0 bụghị 3.0.2.
Nnukwu ntụnyere. O doro anya na Magento Ecommerce ngwọta bụ n'ezie ihe kachasị mma ebe oscommerce bụ otu ihe ngwọta ochie. Ndị mmadụ na-agazi na azịza ọhụụ na nke ọma.